နံနကျစောစောအိပျရာထနိုငျရနျ ဘယျလိုလုပျဆောငျရမလဲ ? ? ? – SoShwe
Home/Health & Beauty/နံနကျစောစောအိပျရာထနိုငျရနျ ဘယျလိုလုပျဆောငျရမလဲ ? ? ?
နံနကျစောစောအိပျရာထနိုငျရနျ ဘယျလိုလုပျဆောငျရမလဲ ? ? ?
admin February 27, 2022	Health & Beauty Leaveacomment
သငျက အလုပျသှားဖို့ အိပျရာထရတာကို မုနျးတီးနပွေီလား။ နာရီ Alarm သုံးခါမွညျပွီးပွီ။ ကျောဖီနှဈခှကျသောကျပွီး လုပျငနျးခှငျအတှငျး ရောကျတဲ့အခြိနျအထိ အိပျရေးမဝလို့ အားအငျခြိနဲ့ပွီး ယိုငျနဲ့နဲ့ဖွဈနပွေီဆိုရငျတော့ အဆိုပါ အခကျအခဲမြားအတှကျ ဖွရှေငျးနညျးကို ပွောပွခငျြပါတယျ။ အလုပျသှားရနျအတှကျ အိပျရာထရတာကို ရပျတနျ့ပဈပွီး ကိုယျ့အတှကျကိုယျ အိပျရာထလိုကျပါ။ အခုဆိုရငျ ကြှနျတျောက အိပျရာစောစောထနပွေီဆိုပမေယျ့ ရုံးကိုတနျးမသှားဘဲ Gym အရငျသှားဆော့လိုကျပါတယျ။ နံနကျခငျးတိုငျးက ကိုယျ့အတှကျပဲဖွဈတယျဆိုတာကို အကွိမျကွိမျ ပွနျလညျစဉျးစားခွငျးက အိပျရာကနေ စောစောနိုးထဖို့အတှကျ ပိုမိုလှယျကူစပွေီး အခုဆိုရငျတော့ ကြှနျတျောက Morning Person တဈယောကျဖွဈနပေါပွီ။
ဒါပမေယျ့ အိပျရာစောစောထတယျဆိုတာကလညျး လူတိုငျးအတှကျ မဟုတျပါဘူး။ MU Health Care မှ ဦးနှောကျနဲ့ အာရုံကွောအထူးကု ပရာဒီပျဘျောလူဆိုတဲ့ ဆေးသိပ်ပံပညာရှငျကတော့ “ကြှနျတျောတို့တှရေဲ့ အိပျခြိနျတှကေ ဇီဝဗဒေနညျးစနဈအရ ခှဲခွားထားရပါတယျ။ နံနကျခငျးပိုငျးမှာ လနျးဆနျးတကျကွှနဖေို့အတှကျဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့အားလုံးက လိုအပျတဲ့အိပျခြိနျနာရီအတိုငျး အိပျစကျဖို့ လိုအပျပါတယျ။ အရှယျရောကျပွီးသူအမြားစုအတှကျ (၂၄) နာရီရှိတဲ့ တဈရကျတာကာလမှာ အနညျးဆုံး (၇) နာရီကနေ (၈) နာရီအထိ အိပျခြိနျရှိဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ဒီအထဲကမှ (၅) ရာခိုငျနှုနျးသော အရှယျရောကျပွီးသူတှကေ (၆) နာရီထကျ ပိုမိုနညျးပါးတဲ့အိပျခြိနျကို လိုအပျပွီး အခွားသော (၅) ရာခိုငျနှုနျးကတော့ (၈) နာရီထကျ ပိုမိုအျိပျစကျဖို့ လိုအပျပါတယျ။” ဟူ၍ ပွောပွသှားခဲ့ပါတယျ။
အိပျရာစောစောထဖို့အတှကျကလညျး ညဘကျစောစော အိပျရာဝငျဖို့ လိုအပျပါသေးတယျ။ ဒါပမေယျ့ မိမိကိုယျကို အလငျြအမွနျပွောငျးလဲလိုကျတဲ့ လူတဈယောကျအနနေဲ့ သူ့ရဲ့ဆုံးဖွတျနိုငျစှမျး၊ စိတျခံစားခကျြနဲ့ လလေ့ာသငျယူနိုငျစှမျးတှအေပျေါမှာလညျး သကျရောကျမှုတှရှေိနိုငျပါတယျ။ ရရှေညျမှာဆိုရငျတော့ အဝလှနျရောဂါ၊ ဆီးခြိုရောဂါ၊ နှလုံးနဲ့သကျဆိုငျတဲ့ ရောဂါမြားဖွဈပှားလာနိုငျတယျလို့ ဟားဗကျဆေးပညာတက်ကသိုလျမှ စဈတမျးမြားအရ သိရှိရပါတယျ။
သငျ့အနနေဲ့ ညဘကျနောကျကတြဲ့ TV အစီအစဉျတှကေို မကွညျ့ဘဲ နံနကျခငျးရဲ့ အလှအပတရားတှကေို ခံစားဖို့အတှကျ အဆငျသငျ့ဖွဈနပွေီဆိုရငျတော့ အောကျပါအခကျြအလကျလေးတှကေို လိုကျပါ လုပျဆောငျကွညျ့လိုကျပါ။
၁။ အိပျခြိနျအတိအကြ သတျမှတျထားခွငျး။
Morning Person တဈယောကျဖွဈဖို့အတှကျဆိုရငျတော့ နစေ့ဉျနေု့တိုငျး အိပျရာဝငျခြိနျနဲ့အိပျရာထခြိနျတှကေို တိတိကကြ သတျမှတျထားဖို့ လိုအပျပါတယျ။ “ဒီအခကျြက ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ဦးနှောကျတှကေို ဘယျအခြိနျမှာ အိပျရာဝငျရမယျ။ ဘယျအခြိနျမှာ အိပျရာထရမယျဆိုတာ နားလညျအောငျ ကူညီပေးပါတယျ။ ဒီလိုလုပျဆောငျခွငျးအားဖွငျ့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျအတှငျး အခြိနျမှနျမှနျ ဖွဈပျေါနတေဲ့ ဇီဝကမ်မဖွဈစဉျတှကေို နဘေ့ကျတှမှော မှနျမှနျကနျကနျဆောငျရှကျစပွေီး ညပိုငျးအခြိနျတှမှောတော့ အနားပေးနိုငျဖို့ အကူအညီပေးပါတယျ။” ဆိုပွီး ဘျောလူက ဆိုပါတယျ။
၂။ ညနေ (၄) နာရီနောကျပိုငျး ကဖိနျးဓာတျမှီဝဲခွငျးကို ရှောငျကွဉျပါ။
နတေ့ဈနရေဲ့ အနှောငျးပိုငျးအခြိနျတှမှော ကျောဖီနဲ့ ဆကျစပျအရာမြားဖွဈကွတဲ့ လကျဖကျရညျ၊ ခြောကလကျတို့ကို စားသောကျခွငျးက ခန်ဓာကိုယျတှငျးက ဇီဝကမ်မဖွဈစဉျမြားကို ရှုပျထှေးစပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အိပျရာဝငျခြိနျနဲ့ အနညျးဆုံး (၅) နာရီမတိုငျခငျမှာ ကျောဖီ လကျဖကျရညျမြားကို သောကျသုံးခွငျးက ကိုယျ့ရဲ့ အိပျခြိနျအပျေါမှာ အနှောငျ့အယှကျမပေးနိုငျပါဘူး။
၃။ ခယျြရီသီးနဲ့ အခွားအစိမျးဖြော့ရောငျ အခှံမာသီးမြား စားသုံးပေးခွငျး။
ဒီအစားအစာတှမှောတော့ အိပျစကျခွငျးကို အကူအညီပေးတဲ့ ဗီတာမငျ B6 နဲ့ မဂ်ဂနီဆီယမျဓာတျတှေ ပါဝငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဒီအသီးတှမှော ပါဝငျတဲ့ Melatonin ဆိုတဲ့ ဟျောမုနျးတဈမြိုးကလညျး အိပျစကျခွငျးကို ပုံမှနျဖွဈစကွေောငျး အာဟာရဓာတျနဲ့ဆကျစပျတဲ့ ဒါရိုကျတာတဈဦးဖွဈသူ ဂကြေလငျးလနျဒနျကဆိုပါတယျ။
၄။ အရမျးနောကျကမြှ ညစာစားခွငျးကို ရှောငျကွဉျပါ။
အိပျခါနီး တဈနာရီအတှငျးမှာ အစားစားခွငျးက သငျ့ကို ညဘကျ အိပျမပြျောတာမြိုးတှေ ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ “သငျ့ရဲ့ အစာအိမျက အစာခဖြေို့အတှကျ အကျစဈတှေ စတငျထုတျလှတျရပွီး သငျ့အနနေဲ့ အိပျရာဝငျဖို့ လဲလြောငျးလိုကျမယျဆိုရငျ ဒီအကျစဈရဲ့ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးတှကွေောငျ့ ရငျဘတျအောငျ့တဲ့ဝဒေနာကို ခံစားရပါလိမျ့မယျ။” ဟူ၍ လနျဒနျက သတိပေးသှားပါတယျ။ ဒီလိုမြိုး အန်တရာယျတှကေ လှတျမွောကျဖို့အတှကျ အိပျရာဝငျခါနီးအခြိနျမှာ အကကျြလှနျနတေဲ့ အတူးလှနျနတေဲ့ အသားတှေ၊ အသားတုတှေ၊ အသငျ့စားသုံးလို့ရတဲ့ အစားအစာတှနေဲ့ အခွားသော အခြိုပှဲမြားကို စားသုံးခွငျးမှ ရှောငျကွဉျဖို့ လိုအပျပါတယျ။
၅။ အိပျရာမဝငျခငျမှာ လကျပျတော့ပျနဲ့ဖုနျးမြားကို အခြိနျအကနျ့အသတျနဲ့ ကိုငျတှယျပါ။
“အိပျရာမဝငျခငျ လကျပျတော့နဲ့ဖုနျးမြားမှ စူးရှတဲ့ အလငျးရောငျတှကေ သငျ့ရဲ့ အိပျခြိနျကို အနှောငျ့အယှကျပေးနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့လို့ မိမိအိပျခြိနျမရောကျခငျ အခြိနျအတိုငျးအတာတဈခု သတျမှတျပွီး လကျပျတော့နဲ့ဖုနျးသုံးစှဲခွငျးတှကေို ရပျတနျ့သငျ့ပါတယျ။ စောနိုငျသမြှစောစော ရပျတနျ့နိုငျတယျဆိုရငျတော့ အကောငျးဆုံးပါပဲ။” လို့ လနျဒနျက အကွံပေးပွောကွားသှားပါတယျ။
၆။ အရကျသောကျသုံးခွငျးကို ဆငျခွငျပါ။
အိပျရာမဝငျခငျမှာ ဝိုငျနီတဈခှကျကို သောကျသုံးခွငျးက သငျ့ရဲ့ မကျြခှံတှကေို လေးလံစတောမှနျကနျပမေယျ့ အိပျရာနိုးလာတဲ့အခြိနျမှာတော့ သငျ့ကို လနျးဆနျးစနေိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ “အယျလျကိုဟောဓာတျတှကေ အိပျစကျခြိနျတှကေို အပိုငျးပိုငျးပွတျတောကျစပွေီး အိပျရေးမဝတာမြိုးတှေ ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။” ဟူ၍ ဒေါကျတာဘျောလူက ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
၇။ မနကျဖွနျအတှကျ ကွိုတငျပွငျဆငျစရာရှိတာကို ပွငျဆငျပါ။
နောကျတဈနမေ့နကျဝတျမယျ့ အဝတျအစားတှကေို အခြိနျမှီအောငျ ညတညျးက ကွိုတငျပွငျဆငျထားခွငျး၊ နောကျတဈနရေဲ့ ရာသီဥတုကို ကွိုတငျ လလေ့ာထားခွငျး၊ နလေ့ယျစာအတှကျ ပွငျဆငျခွငျးအပါအဝငျ အခွားသော လုပျစရာရှိတာမြားကို လုပျဆောငျထားပါ။ ဒီလိုဆိုရငျတော့ သငျ့အနနေဲ့ အိပျရာထခြိနျအနညျးငယျ နောကျကသြှားမယျဆိုရငျတောငျ နောကျနမေ့နကျမှာ အပွေးအလှားလုပျရငျး တဈစုံတဈခုကို မကေ့နျြခဲ့တာမြိုးတှေ ဖွဈလာနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။
၈။ အလငျးရောငျကောငျးကောငျးအောကျမှာ နိုးထပါ။
“သငျ့အနနေဲ့ အိပျရာနိုးနိုးခငျြးမှာ နရေောငျ ဒါမှမဟုတျ အလငျးရောငျကောငျးကောငျးနဲ့ နိုးထခှငျ့ရမယျဆိုရငျ ခန်ဓာကျိုယျတှငျး ဇီဝကမ်မဖွဈစဉျတှကေို တိုးတကျစပွေီး စိတျကိုလညျး ပိုမိုနိုးကွားစပေါလိမျ့မယျ။” ဆိုပွီး ဒေါကျတာဘျောလူက ဆိုပါတယျ။ တကယျလို့ သငျ့ရဲ့အခနျးက မှောငျမိုကျတဲ့အခနျးတဈခနျးဖွဈပွီး ခနျးဆီးလိုကျကာတှေ ခထြားရတယျဆိုရငျတော့ နရေောငျပါဝငျတဲ့ alarm နဲ့ နာရီတဈလုံးကို ဝယျယူထားသငျ့ပါတယျ။
၉။ အိပျရာပျေါမှာ အလုပျတှေ မလုပျပါနဲ့။
အိပျရာပျေါမှာ အီးမေးလျစဈတာမြိုးတှေ၊ အခွားသော အလားတူပုံစံမြိုးတှေ ပွုလုပျတာကို ရှောငျကွဉျရပါမယျ။ “အိပျရာက အိပျစကျဖို့တဈခုတညျးအတှကျဖွဈပွီး အလုပျလုပျဖို့အတှကျ မဟုတျပါဘူး။” ဆိုပွီး ဒေါကျတာဘျောလူက သတိပေးပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
၁၀။ စိတျဓာတျလှုံ့ဆျောမှုမြား ပွုလုပျပါ။
နံနကျခငျး အလုပျမရှိတဲ့ နရေ့ကျတှမှော ကိုယျ့ရဲ့ ပုံမှနျအိပျခြိနျ အခြိနျဇယားကို ထိနျးသိမျးရတာ အရမျးခကျခဲပါတယျ။ အဲ့ဒီလိုနရေ့ကျတှမှော ကိုယျ့ရဲ့ နစေ့ဉျလူနမှေုဘဝထဲက ပြျောရှငျမှုကို ရှာဖှပေါ။ သငျတနျးအသဈတှေ တကျပါ။ သငျ့ရဲ့ အခဈြတျောခှေးလေးနဲ့ သငျကွိုကျနှဈသကျတဲ့ နရောတှကေို လမျးလြှောကျထှကျလိုကျပါ။
နံနက်စောစောအိပ်ရာထနိုင်ရန် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲ ? ? ?
သင်က အလုပ်သွားဖို့ အိပ်ရာထရတာကို မုန်းတီးနေပြီလား။ နာရီ Alarm သုံးခါမြည်ပြီးပြီ။ ကော်ဖီနှစ်ခွက်သောက်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ရောက်တဲ့အချိန်အထိ အိပ်ရေးမဝလို့ အားအင်ချိနဲ့ပြီး ယိုင်နဲ့နဲ့ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ အဆိုပါ အခက်အခဲများအတွက် ဖြေရှင်းနည်းကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ အလုပ်သွားရန်အတွက် အိပ်ရာထရတာကို ရပ်တန့်ပစ်ပြီး ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် အိပ်ရာထလိုက်ပါ။ အခုဆိုရင် ကျွန်တော်က အိပ်ရာစောစောထနေပြီဆိုပေမယ့် ရုံးကိုတန်းမသွားဘဲ Gym အရင်သွားဆော့လိုက်ပါတယ်။ နံနက်ခင်းတိုင်းက ကိုယ့်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အကြိမ်ကြိမ် ပြန်လည်စဉ်းစားခြင်းက အိပ်ရာကနေ စောစောနိုးထဖို့အတွက် ပိုမိုလွယ်ကူစေပြီး အခုဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်က Morning Person တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။
ဒါပေမယ့် အိပ်ရာစောစောထတယ်ဆိုတာကလည်း လူတိုင်းအတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ MU Health Care မှ ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောအထူးကု ပရာဒီပ်ဘော်လူဆိုတဲ့ ဆေးသိပ္ပံပညာရှင်ကတော့ “ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ အိပ်ချိန်တွေက ဇီဝဗေဒနည်းစနစ်အရ ခွဲခြားထားရပါတယ်။ နံနက်ခင်းပိုင်းမှာ လန်းဆန်းတက်ကြွနေဖို့အတွက်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အားလုံးက လိုအပ်တဲ့အိပ်ချိန်နာရီအတိုင်း အိပ်စက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအများစုအတွက် (၂၄) နာရီရှိတဲ့ တစ်ရက်တာကာလမှာ အနည်းဆုံး (၇) နာရီကနေ (၈) နာရီအထိ အိပ်ချိန်ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအထဲကမှ (၅) ရာခိုင်နှုန်းသော အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေက (၆) နာရီထက် ပိုမိုနည်းပါးတဲ့အိပ်ချိန်ကို လိုအပ်ပြီး အခြားသော (၅) ရာခိုင်နှုန်းကတော့ (၈) နာရီထက် ပိုမိုအ်ိပ်စက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။” ဟူ၍ ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။
အိပ်ရာစောစောထဖို့အတွက်ကလည်း ညဘက်စောစော အိပ်ရာဝင်ဖို့ လိုအပ်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် မိမိကိုယ်ကို အလျင်အမြန်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်း၊ စိတ်ခံစားချက်နဲ့ လေ့လာသင်ယူနိုင်စွမ်းတွေအပေါ်မှာလည်း သက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ ရေရှည်မှာဆိုရင်တော့ အဝလွန်ရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ နှလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ရောဂါများဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့ ဟားဗက်ဆေးပညာတက္ကသိုလ်မှ စစ်တမ်းများအရ သိရှိရပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ ညဘက်နောက်ကျတဲ့ TV အစီအစဉ်တွေကို မကြည့်ဘဲ နံနက်ခင်းရဲ့ အလှအပတရားတွေကို ခံစားဖို့အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ အောက်ပါအချက်အလက်လေးတွေကို လိုက်ပါ လုပ်ဆောင်ကြည့်လိုက်ပါ။
၁။ အိပ်ချိန်အတိအကျ သတ်မှတ်ထားခြင်း။
Morning Person တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ နေ့စဉ်နေု့တိုင်း အိပ်ရာဝင်ချိန်နဲ့အိပ်ရာထချိန်တွေကို တိတိကျကျ သတ်မှတ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ “ဒီအချက်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦးနှောက်တွေကို ဘယ်အချိန်မှာ အိပ်ရာဝင်ရမယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ အိပ်ရာထရမယ်ဆိုတာ နားလည်အောင် ကူညီပေးပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း အချိန်မှန်မှန် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တွေကို နေ့ဘက်တွေမှာ မှန်မှန်ကန်ကန် ဆောင်ရွက်စေပြီး ညပိုင်းအချိန်တွေမှာတော့ အနားပေးနိုင်ဖို့ အကူအညီပေးပါတယ်။” ဆိုပြီး ဘော်လူက ဆိုပါတယ်။
၂။ ညနေ (၄) နာရီနောက်ပိုင်း ကဖိန်းဓာတ်မှီဝဲခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
နေ့တစ်နေ့ရဲ့ အနှောင်းပိုင်းအချိန်တွေမှာ ကော်ဖီနဲ့ ဆက်စပ်အရာများဖြစ်ကြတဲ့ လက်ဖက်ရည်၊ ချောကလက်တို့ကို စားသောက်ခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များကို ရှုပ်ထွေးစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိပ်ရာဝင်ချိန်နဲ့ အနည်းဆုံး (၅) နာရီမတိုင်ခင်မှာ ကော်ဖီ လက်ဖက်ရည်များကို သောက်သုံးခြင်းက ကိုယ့်ရဲ့ အိပ်ချိန်အပေါ်မှာ အနှောင့်အယှက်မပေးနိုင်ပါဘူး။
၃။ ချယ်ရီသီးနဲ့ အခြားအစိမ်းဖျော့ရောင် အခွံမာသီးများ စားသုံးပေးခြင်း။
ဒီအစားအစာတွေမှာတော့ အိပ်စက်ခြင်းကို အကူအညီပေးတဲ့ ဗီတာမင် B6 နဲ့ မဂ္ဂနီဆီယမ်ဓာတ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီအသီးတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ Melatonin ဆိုတဲ့ ဟော်မုန်းတစ်မျိုးကလည်း အိပ်စက်ခြင်းကို ပုံမှန်ဖြစ်စေကြောင်း အာဟာရဓာတ်နဲ့ဆက်စပ်တဲ့ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်သူ ဂျေကလင်းလန်ဒန်ကဆိုပါတယ်။
၄။ အရမ်းနောက်ကျမှ ညစာစားခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
အိပ်ခါနီး တစ်နာရီအတွင်းမှာ အစားစားခြင်းက သင့်ကို ညဘက် အိပ်မပျော်တာမျိုးတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ “သင့်ရဲ့ အစာအိမ်က အစာချေဖို့အတွက် အက်စစ်တွေ စတင်ထုတ်လွှတ်ရပြီး သင့်အနေနဲ့ အိပ်ရာဝင်ဖို့ လဲလျောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီအက်စစ်ရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကြောင့် ရင်ဘတ်အောင့်တဲ့ဝေဒနာကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။” ဟူ၍ လန်ဒန်က သတိပေးသွားပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အန္တရာယ်တွေက လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် အိပ်ရာဝင်ခါနီးအချိန်မှာ အကျက်လွန်နေတဲ့ အတူးလွန်နေတဲ့ အသားတွေ၊ အသားတုတွေ၊ အသင့်စားသုံးလို့ရတဲ့ အစားအစာတွေနဲ့ အခြားသော အချိုပွဲများကို စားသုံးခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၅။ အိပ်ရာမဝင်ခင်မှာ လက်ပ်တော့ပ်နဲ့ဖုန်းများကို အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ ကိုင်တွယ်ပါ။
“အိပ်ရာမဝင်ခင် လက်ပ်တော့နဲ့ဖုန်းများမှ စူးရှတဲ့ အလင်းရောင်တွေက သင့်ရဲ့ အိပ်ချိန်ကို အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ မိမိအိပ်ချိန်မရောက်ခင် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခု သတ်မှတ်ပြီး လက်ပ်တော့နဲ့ဖုန်းသုံးစွဲခြင်းတွေကို ရပ်တန့်သင့်ပါတယ်။ စောနိုင်သမျှစောစော ရပ်တန့်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။” လို့ လန်ဒန်က အကြံပေးပြောကြားသွားပါတယ်။
၆။ အရက်သောက်သုံးခြင်းကို ဆင်ခြင်ပါ။
အိပ်ရာမဝင်ခင်မှာ ဝိုင်နီတစ်ခွက်ကို သောက်သုံးခြင်းက သင့်ရဲ့ မျက်ခွံတွေကို လေးလံစေတာမှန်ကန်ပေမယ့် အိပ်ရာနိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ သင့်ကို လန်းဆန်းစေနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ “အယ်လ်ကိုဟောဓာတ်တွေက အိပ်စက်ချိန်တွေကို အပိုင်းပိုင်းပြတ်တောက်စေပြီး အိပ်ရေးမဝတာမျိုးတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။” ဟူ၍ ဒေါက်တာဘော်လူက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၇။ မနက်ဖြန်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်စရာရှိတာကို ပြင်ဆင်ပါ။
နောက်တစ်နေ့မနက်ဝတ်မယ့် အဝတ်အစားတွေကို အချိန်မှီအောင် ညတည်းက ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်း၊ နောက်တစ်နေ့ရဲ့ ရာသီဥတုကို ကြိုတင် လေ့လာထားခြင်း၊ နေ့လယ်စာအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်းအပါအဝင် အခြားသော လုပ်စရာရှိတာများကို လုပ်ဆောင်ထားပါ။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ အိပ်ရာထချိန်အနည်းငယ် နောက်ကျသွားမယ်ဆိုရင်တောင် နောက်နေ့မနက်မှာ အပြေးအလွှားလုပ်ရင်း တစ်စုံတစ်ခုကို မေ့ကျန်ခဲ့တာမျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၈။ အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းအောက်မှာ နိုးထပါ။
“သင့်အနေနဲ့ အိပ်ရာနိုးနိုးချင်းမှာ နေရောင် ဒါမှမဟုတ် အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းနဲ့ နိုးထခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တွေကို တိုးတက်စေပြီး စိတ်ကိုလည်း ပိုမိုနိုးကြားစေပါလိမ့်မယ်။” ဆိုပြီး ဒေါက်တာဘော်လူက ဆိုပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ရဲ့အခန်းက မှောင်မိုက်တဲ့အခန်းတစ်ခန်းဖြစ်ပြီး ခန်းဆီးလိုက်ကာတွေ ချထားရတယ်ဆိုရင်တော့ နေရောင်ပါဝင်တဲ့ alarm နဲ့ နာရီတစ်လုံးကို ဝယ်ယူထားသင့်ပါတယ်။
၉။ အိပ်ရာပေါ်မှာ အလုပ်တွေ မလုပ်ပါနဲ့။
အိပ်ရာပေါ်မှာ အီးမေးလ်စစ်တာမျိုးတွေ၊ အခြားသော အလားတူပုံစံမျိုးတွေ ပြုလုပ်တာကို ရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။ “အိပ်ရာက အိပ်စက်ဖို့တစ်ခုတည်းအတွက်ဖြစ်ပြီး အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် မဟုတ်ပါဘူး။” ဆိုပြီး ဒေါက်တာဘော်လူက သတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၁၀။ စိတ်ဓာတ်လှုံ့ဆော်မှုများ ပြုလုပ်ပါ။
နံနက်ခင်း အလုပ်မရှိတဲ့ နေ့ရက်တွေမှာ ကိုယ့်ရဲ့ ပုံမှန်အိပ်ချိန် အချိန်ဇယားကို ထိန်းသိမ်းရတာ အရမ်းခက်ခဲပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုနေ့ရက်တွေမှာ ကိုယ့်ရဲ့ နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝထဲက ပျော်ရွှင်မှုကို ရှာဖွေပါ။ သင်တန်းအသစ်တွေ တက်ပါ။ သင့်ရဲ့ အချစ်တော်ခွေးလေးနဲ့ သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ နေရာတွေကို လမ်းလျှောက်ထွက်လိုက်ပါ။
Previous အဝတျဗလာဖွငျ့ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ကောကျကွောငျးအလှကို အရှငျးသားထုတျဖျောပွသခဲ့တဲ့ ကမ်ဘာကြျောအနုပညာရှငျမြား။